Burn khalori nge-spray spreader
Kubafazi abaninzi, ingxaki enkulu kukubona kobunzima bomzimba obuninzi. Ukufumana ezininzi iikhalori ekudleni, elinye ibhinqa loshishino langamanye amaxesha alinayo ixesha lokuya kuqeqesho kulo naliphi na indawo yokuzivocavoca okanye icandelo lezemidlalo. Ngaba kukho indlela yokuphuma kule meko? Ngaba kunokwenzeka nayiphi na indlela yokuchitha imali engaphezu kwemali ezayo emzimbeni wethu ngokutya ngaphandle kokuchitha ixesha kunye nemali kwikiti yexesha lezemidlalo? Kuyabonakala ukuba oku kunokwenzeka ukuba sitshisa iikhalori nge-carpal expander.
Ngoko, yintoni impela i-carpal expander? Imodeli eqhelekileyo yenziwa ngefomathi yamanqabunga enesisindo kunye ne-elastic. Ukubeka i-carpal expander entendeni, siqala ukuyicinezela okokuqala ukuya kwimeko ephezulu, ngoko, ngokungagcini i-brush, sibuyisela i-expander kwisikhundla sokuqala. Ngokwenza izinto ezinjalo ezilula, ngoko sitshisa iikhalori ezingaphezulu ngokuncediswa ngumxhasi. Ngokusebenzisa amandla okwenza lo msebenzi wokuzilolonga, sinegalelo ekusebenziseni iiponti ezinamafutha asemacaleni omzimba wethu, iisisu, isisu. Ezi ziza zafumana igama "iingingqi zengxaki" ngenxa yobuninzi beeseli ezinamafutha. Iphutha elipheleleyo kukuba uluvo olwenziwe ngalo ukuqhutywa kwezixhobo ezenziwa ngolu hlobo lwe-carpal expander lubangela ukutshiswa kweentlawulo ezinamafutha kuphela kwindawo ye-forearm. Ngokuqinisekileyo, kuphela iimbumba ze-muscle ezikwindawo yesandla kunye ne-forearm zifumana ukuzikhandla ngokomzimba, kodwa iindleko zamandla ekusebenziseni iimvavanyo ezinjalo zihlawulwa ngenxa ye-oxidation ye-molecule yamanqatha ukusuka kwiindidi ezahlukahlukeneyo zomzimba, kubandakanywa "kwiinkalo zengxaki". Oku kubangelwa kukuba umzimba womntu uyinkqubo eyodwa kunye neyoqobo yezinto eziphilayo.
Yintoni ekufuneka ibe yomelele yokuzivocavoca ngoncedo lwe-carpal expander? Ukuba zonke i-10-15 zokuphindaphinda zivame ukuqhutyelwa kwindlela nganye, xa iikhalori zitshiswa ngokucinywa kwaye zingenakunqanda i-carpal expander kunokwenzeka ukuphindaphinda amaninzi, kwaye kunye neqondo eliphezulu lokuqina, inani lokuphindaphinda lingaphaya kwekhulu.
I-carpal expander ifaneleke kakhulu kumfazi wamashishini wamanje ngenxa yezinto ezilandelayo. Okokuqala, kuyinto elula kakhulu, elula kwaye ehambelanayo engafakwa kalula kwikhwagi elincinci, ngokubonga ukuba umfaki wezinto ezichanekileyo angathathwa kunye naye ukuba asebenze, aphumule kunye nokuhamba ngeentengiso. Okwesibini, ukwenza le mizimba ayifuni ixesha lokukhulula - ukunyanzelisa nokwandisa i-expander ingaba phantse yonke indawo, ngaphandle kokuphazamiseka emsebenzini omkhulu: ukuhlala esihlalweni somsebenzi eofisini, ngelixa uhambahamba, ukuhamba. Okwesithathu, i-carpal expander ibiza imali encinci. Ukuthengwa kwayo kuya kukuvumela ukuba ulondoloze ekuthengeni amathikithi exesha lokuvakashela amacandelo ezemidlalo, kodwa ngeli xesha liza kunika ithuba lokutshisa iikhalori ngokuzilolonga umzimba.
Ngaloo ndlela, usebenzisa i-carpal expander evamile, ungayitshisa ngokufanelekileyo nangempumelelo ngeteksi. Ukuzivocavoca okusebenzisa i-expander leyo kunokukuvumela ukuba uhlale unesimo esihle ngokwenyama kungakhathaliseki indawo kunye nohlobo lomsebenzi.
Isondlo kwindlela yokusebenza kwempilo
Ukutya kunye nomxholo ophezulu wefayibha
Inkqubo yokuzivocavoca yokunceda imisipha
Xa kuqala i-toxemia
Izindlela zokukhulelwa kokukhulelwa ukukhusela ukukhulelwa okungafunekiyo
Ngenxa kaPaulina Andreyeva, unyana kunye nomfazi owayengumfazi waseFyodor Bondarchuk ngokukhawuleza washiya iKinotavr-2016
Isitayela esine-40: i-jewelry eyimfashini yebusika 2016
Ukusilalisa ngesisu, amathanga, amabele ngokubhekiselele kwi-cellulite
Izindlela ezingaqhelekanga zokuzinyamekela kwi-Ex-model uGilly Johnson
Isikhokelo soBumnandi 2013
U-Ksenia Sobchak ufumana uxinzelelo lwe-postpartum
Uphi na indlela yokufumana ugqozi?
U-Ksenia Sobchak washaqeka umzobo ofile owawuzelele